Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dhowaan la soo wareegeyso Maamulida Hawada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
4th July 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com-Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhowaan la soo wareegeyso Maamulka Hawada Soomaaliya oo muddo ka badan 20-sano ay gacanta ku heyso Hey’adda ICAO.
Wasiirka Gaadiidka iyo duulista Hawada Soomaaliya Saciid Jaamac Qorsheel oo maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Canada oo kula soo kulmay Madaxda Hey’adda ICAO.
“Waxaan rabaa inaan idinla wadaago hawada Soomaaliya gacan ku haynteeda in badan ayay maqneyd sidii mar un gacanta Soomaaliya loogu soo celin laha, 18-ki bishii tegtay waxaan la shirnay Madaxda Hay’adda (ICAO) oo aan isla garanay in dhawaan ay bilaabato sidii aan ula soo wareegi lahayn”ayuu yiri Wasiir Saciid Qoorsheel.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay inay doonayaan in Soomaaliya ay u madax banaanaato howsheeda, gaar ahaan maamulka hawada Soomaaliya, isagoo xusay inay rajeynayaan in goor dhow lagu soo wareejiyo.
Dhinaca kale Wasiirka ayaa sheegay in dhowaan lagu soo wareejin doono qalab, kaasoo laga hirgelin doono garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, waxaana uu xusay in qalabkaas dadaal dheer kadib ay ku guuleysteen inay ku soo wareejiyaan Muqdisho, halka markii hore uu ku socday Xafiiska ICAO ee Nairobi.
Hawada Soomaaliya ayaa waxaa muddo maamuleysay Hey’adda ICAO, dowladihii KMG ee soo maray Soomaaliya ayaa horay isugu dayay inay soo wareejiyaan, hase ahaatee kuma aanay guuleysan.